‘आगोलाई पानी’को दर्शन ः ‘घृणालाई प्रेम’को व्यवहार – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘आगोलाई पानी’को दर्शन ः ‘घृणालाई प्रेम’को व्यवहार
भगवान् गौतम बुद्ध कुनै गाउँमा प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो । जीवनका अनेक समस्या र तिनको समाधानका उपायका बारेमा उहाँको प्रवचन केन्द्रित थियो । प्रवचनको क्रम सकियो । भगवान् बुद्ध एकान्तमा रहनुभएको मौका पारी एक जना ग्रामीण व्यक्ति उहाँको नजिक आएर प्रश्न गरे, ‘भगवन्, तपाईंले प्रवचन गर्न थाल्नुभएको यतिका वर्ष भइसक्यो । वर्षौंँवर्षदेखि तपाईँ मानिसहरुलाई सुख र मुक्तिका अनेक उपायका बारेमा बताइरहनुभएको छ । के तपाईँलाई थाहा छ, आजसम्म कति जनाले मुक्ति प्राप्त गरे ? कति जनाले गहन शान्तिको अनुभव गरे ?’
ती ग्रामीण व्यक्तितिर फर्कँदै समुस्कान बुद्धले भन्नुभयो, ‘तपाईँ पहिला यो गाउँका मानिसहरुलाई भेटेर सोध्नुस् र उनीहरु के पाउन चाहन्छन्, पत्ता लगाउनुस् । उनीहरुले पाउन खोजेको कुराको जानकारीसहित मकहाँ आउनुुस् अनि तपाईँको प्रश्नमाथि छलफल गरौँला ।’
ती व्यक्ति गाउँ फर्किए । गाउँका प्रत्येक सदस्यलाई उनीहरुले जीवनमा चाहेको कुराबारे जिज्ञासा राखे । प्रत्युत्तरमा उनले मानिसहरुले जीवनमा पैसा, सम्पत्ति, प्रसिद्धि, मनोरञ्जन, छोरानाति, इज्जत–प्रतिष्ठाजस्ता सांसारिक आनन्द चाहेको कुरा थाहा पाए । उनीहरुमध्ये कसैले पनि मुक्ति, आत्मिक सुख र गहन शान्ति चाहेको कुरा बताएनन् । सबैको गन्तव्य भौतिक वैभव र सांसारिक आनन्दको प्राप्ति थियो ।
मान्छेले चाहेका कुराको जानकारी हासिल गर्न गाउँ पसेका ती व्यक्ति फर्किएर भगवान् गौतम बुद्ध रहनुभएको ठाउँमा आए । उनलाई नजिक देखेपछि बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो, ‘आउनुभयो ? ल भन्नुस्, मान्छेका इच्छाहरु के–कस्ता रहेछन् ? मानिसहरु के चाहँदा रहेछन् त ?’
‘भगवान्, लगभग सबैले धनसम्पत्ति र भौतिक सुख चाहेको कुरा बताए । सबैको दौडधूप संसारमा पाइने सुख र मनोरञ्जनका लागि भएको मैले पाएँ । कसैले पनि मोक्ष र शान्तिको कुरा गरेनन् ।’— यसरी ती ग्रामीण व्यक्तिले बुद्धलाई जानकारी गराए ।
त्यसपछि उनलाई सम्बोधन गर्दै भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, ‘सायद, तपाईँले मलाई सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनुभयो होला । मैले यो गाउँका मानिससँग बोध, जागरण, मुक्ति र शान्तिको कुरा बारम्बार गरिरहेको छु र पनि कुनै गाउँलेमा जागरणको तरङ्ग पैदा हुन सकेको छैन । वर्षौँेदेखि मैले मुक्ति र शान्तिका बारेमा यो गाउँका मानिसहहरुबीच प्रवचन गरिरहेको छु, तर पनि कसैले मुक्ति र शान्तिको अनुभूति गर्न सकेनन्, किनकि उनीहरु बोध चाहँदैनन्, शान्ति र मुक्ति चाहँदैनन् । न त आत्मिक सुखका बारे चिन्तन र प्र्रयत्न गर्ने उनीहरुसँग समय नै छ ।’
‘प्रभो, उनीहरुले जीवनमा के पाएका छन् त त्यसोभए ?’— ग्रामीण जिज्ञासुको जिज्ञासा रोकिएन । बुद्धले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो,‘प्रशस्त पाएका छन्, धेरै कुरा छन् उनीहरुसँग । जे उनीहरुले चाहे, त्यही पाएका छन् । धनसम्पत्ति, घरपरिवार, छोरानाति, जागिर, प्रसिद्धिको उनीहरुसँग कुनै अभाव छैन । सबै भएर पनि तर उनीहरुसँग जागरण छैन, बोध छैन । शान्ति र सन्तुष्टिको अभाव छ । त्यो पनि पूरा हुनेथियो, यदि उनीहरुले चाहेका भए । कुनै पनि कुरा सङ््कल्प र विचारले मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । जबसम्म मानिसमा मोक्ष र शान्तिको विचार आउँदैन र त्यसको प्राप्तिका लागि उनीहरुले गहिरो सङ््कल्प गर्नेछैनन्, तबसम्म संसारका कुनै पनि ‘बुद्ध’हरुले उनीहरुलाई शान्त र दुःखमुक्त बनाउन सक्ने छैनन् ।’
गौतम बुद्धले ‘शान्तिको अर्थ श्रमशीलता हो, घृणाको बदलामा प्रेम गर्नु नै यसको सार हो ।’ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार निरन्तरको लगन र श्रमको प्रतिफलमा जे पाइन्छ, त्यसले शान्तिको दिव्यानुभूति गर्न सकिन्छ । घृणाका विरूद्ध घृणा, प्रतिशोधका विरूद्ध प्रतिशोध र क्रोधका विरूद्ध क्रोधले कहिल्यै सुख र शान्तिको अनुभूति हुन सक्दैन, त्यसैले तिमी ‘घृणाका विरूद्ध प्रेम’को दर्शन लिएर बाँच भन्ने आह्वान् सबै मनुष्यसँग बुद्धले गर्नुभएको छ ।
‘जस्तालाई तस्तै’को दर्शन सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । सकारात्मक व्यवहारको जवाफमा ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने दर्शन जति सान्दर्भिक छ, नकारात्मक व्यवहारका सन्दर्भमा उत्ति नै असान्दर्भिक । आगोलाई बाल्ने बेलामा ‘आगोलाई आगो’ भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर आगोलाई निभाउनका लागि ‘आगोलाई आगो’ भन्ने सिद्धान्त सम्पूर्ण रुपमा असान्दर्भिक र अनुचित छ । आगो निभाउने बेलामा ‘आगोलाई पानी’को सिद्धान्त अवलम्बन नगरी सुखै छैन ।
मानिसमा प्रेममा शक्ति छ भन्ने विश्वास कम हुँदै गएको पाइन्छ । ‘जो रिसाउन सक्यो उही बलियो, जसले ध्वंस गर्न सक्यो उही शक्तिशाली’ भन्ने मान्यताले निकै बजार लिएको छ । कसैले यदि हामीसँग रिसाएर व्यवहार ग¥यो भने हामीले त्यसका बदलामा प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्दा कमजोर भइन्छ कि भन्ने भय हामीभित्र विद्यमान छ । हामीले ‘टिट फर ट्याट’लाई जीवनको आदर्शका रुपमा स्थापित गर्दै छौँ ।
मानिसहरु पानीलाई केही ठान्दैनन् । पानी मह¤वपूर्ण छ भन्ने कुरा आगोको सम्पर्कमा आजको मान्छेले चटक्क भुलेको छ । अग्निमय बनेको छ, मान्छेको जीवन आज । हामीले खाने कुरा अत्यन्त चिल्लो, पिरो, अमिलोमिश्रित हुन्छन् । ती खानाका परिकारले पनि शरीरमा गर्मी उत्पन्न गरिरहेका छन् । हामी धेरै कमाउने हुटहुटीमा लगातार दौडिइरहेका छौँ । यसले पनि शरीरमा ताप र गर्मी पैदा गरेको छ । रुखबिरूवा काटी वरपरको वातावरण उजाड बनाएर पनि हामीले चर्को गर्मीको सामना गर्नु परेकै छ । कसैसँग सामान्य भनाभन हुँदा पनि हामी न्वारानदेखिको बल निकालेर रिसाउँछौँ, क्रोधमा आउँछौँ । यसले पनि शरीर पूरै तताउँछ ।
विभिन्न लोभ, वासना, आसक्तिका कारण हामी उच्च रक्तचापलगायतका विभिन्न रोगका सिकार भएका छौँ । यसबाट पनि मुटुको धड्कन अस्वाभाविक रुपमा बढेर शरीरको तापलाई बढाइदिएको छ । हामीसँग तापैताप छ, आगो नै आगो छ । बाहिर पनि डढेलो लागेको छ र भित्र पनि डढेलो लागेको छ । बाहिर लागेको डढेलो त हावाहुरी र गर्मी हटेपछि हराएर जाला, तर हामीभित्रको डढेलो निभ्नेवाला छैन । यसले त शिशिरमा पनि हामीलाई जलाउन छोड्दैन ।
हाम्रो जीवन यतिखेर अग्निमय बनेको छ । शरीरमा तापको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन, तर अनावश्यक तापले हानि गर्छ भन्ने कुरामा पनि सबै एक मत छन् । जताततै तातो मात्र छ, ताप मात्र छ । यो हाम्रो चिसो हटाउने तातोभन्दा पनि हामीलाई जिउँदै डढाउने तातो हो । तर, यो तातोका निर्माता हामी स्वयम्् हौँ । हामीले खाने चुरोट हामी आफैँले बनाएका छौँ । चुरोट खाएर के हामीले स्वयम्लाई जलाएका छैनौँ ? हामीले मुखमा दिएको निरन्तरको चुरोट र बिँडीको दागबत्तीले हामीलाई अविच्छिन्न डढाइरहेको छ । हामीले खाएर बनेको चुरोको खरानीसँगै हाम्रो जीवन पनि खरानी बनेर गएको छ ।
धूवाँले कहिल्यै पनि शीतलता प्रदान गर्दैन । आगोबाट पैदा हुने धूवाँले हामीभित्र आगो नै पैदा गर्दछ । यसले पनि शरीरभित्र सहनै नसक्ने ताप पैदा गरेर हामीलाई विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याहरुको काँडेपर्खालभित्र घेरिएर बस्न बाध्य बनाएको छ । हामीभित्र धेरै मैलहरु छन् । तिनलाई कहिल्यै पनि धूवाँले पखाल्न सक्दैन । त्यसका लागि पानीको आवश्यकता पर्दछ ।
हामी धूलो, धूवाँ र मैलो पिएर बाँच्न किन चाहन्छौँ ? के हामीलाई प्रकृतिले उपलब्ध गराएको अक्सिजनयुक्त हावा नमीठो लागेर हो ? प्रकृतिले कति सुन्दर शरीर दिएर पठाएको छ हामीलाई । यो शरीरको के दोष छ र हामी यति सफा र स्वच्छ शरीरलाई धूवाँ पिएर मैलो बनाउन चाहन्छौँ ? संसारमा कुनै पनि कीटपतङ्ग, पशुपक्षी र जीवजनावरले न पिएको धूवाँ पिएर आजको मान्छेले आफूलाई अत्यन्त निकृष्टको कोटीमा उभ्याएको छ । मनुष्य त धूवाँ र धूलोलाई सफा गर्न, धुन र पखाल्न जन्मिएको प्राणी हो । यदि उसले नै शरीरलाई धूलो, धूवाँ र मैलो भरेर कुरुप बनाउँछ भने जीवनप्रति मनुष्यको योभन्दा ठूलो गद्दारीको उदाहरण अर्को खोज्न कतै जानु पर्दैन ।
धूलो, मैलो र धूवाँ कुनै पनि हालतमा सभ्यताका संवाहक हुन सक्दैनन् । यदि कसैले धूवाँलाई सभ्यताको प्रतिबिम्ब ठान्छ भने त्यो मनुष्यसभ्यताको कलङ्क हो । मनुष्यको नाम र शरीर लिएर मनुष्यलाई नै समाप्त गर्ने ‘धूवाँका सौखिनहरु’ जीवन र जगत्का ठूला धोकेबाज हुन् । हामीले ‘धूवाँ’ पिएर जीवनप्रति गद्दारी गर्नुहुँदैन । शरीरलाई पवित्र बनाउनुछ, निर्मल र कञ्चन बनाउनुछ तर आगो पिएर होइन, पानी पिएर किनकि पानी नै स्वच्छता र शीतलताको जननी हो, पानी नै जिन्दगानी हो ।
क्रोध ध्वंस हो भने प्रेम निर्माण । मान्छे धर्तीमा निर्माण गर्न जन्मिएको हो, सिर्जना गर्न जन्मिएको हो । ऊ यो सुन्दर जगत्को चौकीदार पनि हो । प्रेमरुपी पानीको सिंचाइमा नै जीवन–जगत्का अनेक पूmलहरु फुल्न सक्छन् । कसैले, हामीप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन, जति हामीले अरुप्रति गर्ने व्यवहारले राख्दछ । अरुले जेसुकै गरुन्, त्यसको जस–अपजस उनीहरुले नै भोग्छन् । अरुलाई हेरेर हामीले आपूm हिँड्ने बाटो निश्चित गर्ने होइन । हामी स्वयम्भित्रको क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, रूचि र निष्ठा हामीलाई अरुभन्दा पृथक् र मौलिक बनाउने औजार हुन् ।
गौतम बुद्ध भन्नुहुन्थ्यो, ‘कसैले तिमीप्रति नराम्रै व्यवहार गर्छ भने पनि तिमी उसप्रति नकारात्मक नहोऊ ।’ भोगको संसारमा चुर्लुम्म डुबेका मान्छे बुद्धभन्दा ठूला हुन सक्दैनन् । उनीहरु त हामीलाई ‘रिसाउनेसँग रिसाऊ, खुसी हुनेसँग खुसी बन’ भनेर सिकाउँछन् । बुद्धका विचारमा यो भनाइ आधा मात्र ठीक छ । खुसी हुनेसँग खुसी बन्ने कुरा ठीक छ, तर रिसाउनेसँग पनि खुुसी हुन सक्नुपर्छ । यो आगो निभाउन पानीको आवश्यकता परेजस्तै हो । झगडा गरेका दुई जनामध्ये दुवै जना रिसाएर समस्याको समाधान भएको कतै सुनिएको छैन । समस्याको समाधान शान्त भएर खोज्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, ‘रिसाउनेसँग रिसाऊ, नरिसाउनेसँग पनि रिसाऊ’ भन्नेहरु पनि उत्तिकै मात्रामा बढेर गएका छन्, आज ।
संसारमा मान्छे खुसी रहन त चाहन्छ, तर खुसी हुने काम गर्न चाहन्न । ऊ एकतिरबाट सुखको आकाङ्क्षा गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिरबाट दुःख पाइरहेको हुन्छ । हामीले खोजेको सुख अल्पकालीन छ, किनकि हामीले भौतिक वस्तुमा सुख खोजिरहेका छौँ । यो खोजीमा हामीले सुख त पाएका छौँ, तर त्यो सुखले हामीलाई अझ धेरै दुःख दिएर गएको छ ।
हामी गाडी चढ्न थाल्यौँ, बिजुली बाल्न थाल्यौँ, टेलिफोनमा कुरा गर्न थाल्यौँ । गर्मीका बेलामा पङ्खामा बस्न थाल्यौँ । यी सबैले सहज जीवन बिताउन हामीलाई सहयोग त गरेका छन्, तर हामीलाई दास बनाएर । बत्तीको उज्यालोमा रमाउँदा हामी जति खुसी हुन्छौँ, बत्ती जाँदा त्योभन्दा धेरै दुःखी हुन्छौँ । चर्को गर्मीमा पङ्खा लगाउँदा वा वातानुकूलित कोठामा बस्दा जति आनन्द आउँछ, झ्याप्प बिजुली गएर गर्मी सहनु पर्दा त्योभन्दा धेरै पीडाको अनुभव हामीलाई हुने गर्दछ ।
हामीले भन्ने गरेका सुख र दुःखहरुको स्रोत एउटै छैन र हुँदैन पनि । सबै मान्छे सम्पत्ति पाएर रमाएका छन् भन्न सकिँदैन । सम्पत्ति भएर पनि असन्तुष्टहरु थुप्रै छन् । सम्पत्तिको अभावमा पनि सन्तुष्टहरु भेट्न सकिन्छ । सन्तुष्टि बाहिरको कुरा होइन । यसो भएर नै बाहिरका विषयहरुमा सुख र सन्तोष खोजेर पाइँदैन ।
अनन्त आनन्द त हामीभित्रै छ । सम्पूर्ण रत्नहरु हामीभित्रै छन्, तर हामीभित्रको वैभवलाई हामीले वैभव ठान्न सकेनौँ । हामीभित्र सम्भावनाको विशाल सागर छ । प्रेम, करूणा, दया, त्याग र सहयोगजस्ता कुरा हाम्रा सम्पत्ति हुन् । भौतिक सम्पन्नता पनि प्रेम र दयाको अभावमा विपन्नतामा बदलिएर जान्छन् । हृदयमा प्रेम नहुनेहरु सम्पत्ति भएर पनि दुःखी हुन्छन् ।
सधैँ रिसाएर अरुमाथि शासन गर्न सकिँदैन । आवेश र क्रोधले मानिसलाई ग्लानि र हीनताबोधबाहेक केही पनि दिँदैनन् । एकछिन घमण्ड र क्रोध प्रकट गरेर कसैलाई नियन्त्रणमा राख्न त सकिएला, तर मन जित्न सकिँदैन । मन र हृदय जित्न त केवल प्रेम चाहिन्छ ।
बगैँचामा पूmलहरु फुलेकै छन् । आकाशमा सूर्य र चन्द्र उदाएकै छन् । वरपर सिरसिर हावा चलेकै छ । तर, सबैले बगैँचाको फूलको सौन्दर्य दर्शन गर्न पाएका छैनन् । जो–जो बगैँचामा गए, उनीहरु नै फूलको सौन्दर्य अनुभव गर्न सफल भए । यो वसुन्धरा वीरहरुको हो । मनुष्यभन्दा वीर अर्को कोही छैन । जो मनुष्य भएर पनि जीवनदेखि निराश छ, उदास छ, आपूmलाई भाग्यले ठगेको ठानेर दुःखी हुन्छ, उसले आफ्नो वीरता प्रदर्शन गर्न सकेन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
भाग्यले उसलाई ठग्छ, जसले कर्मलाई ठगेको हुन्छ । कर्मक्षेत्र हाम्रो भाग्य निर्माण गर्ने मैदान हो । कर्मशील मनुष्यभन्दा भाग्यमानी अर्को कोही हुन सक्दैन । शान्ति र मोक्ष पनि हाम्रै पाखुरी र प्रयत्नका प्रतिफल हुन् । हामी कामबाट भागेर कुण्डलीको शरणमा जान छोडेका दिन मात्रै भाग्यले हाम्रो साथ दिन थाल्नेछ ।
हामी कुण्डलीको पछाडि दौडन्छौँ, तर भाग्यले हामीलाई जहिले पनि छल गरिरहको हुन्छ । आँखाअगाडिको कामबाट भागेर भाग्य खोज्न तम्सनेहरुसँग भाग्य पनि सावधान रहन्छ । त्यसैले, पन्ध्र ठाउँमा कुण्डली लिएर भौँतारिने कामचोरहरुले कहिल्यै पनि सफलता प्राप्त गरेका उदाहरणहरु छैनन् । भाग्य खोजेर होइन, गरेर बनाउने विषय हो । श्रमशील मान्छेहरु श्रम र मिहिनेत गरेरै भाग्यलाई आफ्ना पछाडि दौडाउँछन् । कर्मयोगी र कर्महीनहरुमा भएको फरक नै यही हो— भाग्य कर्मशीलका पछाडि दौडन्छ भने कामचोरहरु भाग्यका पछाडि दौडन्छन् ।
पूरा संसार नै हाम्रो सेवा र सहयोगका लागि तत्पर छ । हामीले नचाहेसम्म र श्रमका लागि हात अगाडि नसारेसम्म अरुले गरेको सहयोगले केही हुनेवाला छैन । बुद्धहरु त निरन्तर जन्मिरहेका छन्, किनकि संसारमा बुद्धूहरु पनि जन्मिरहेका छन् । अँध्यारो हटाउन उज्यालो जन्मिएजस्तै बुद्धूहरुलाई बोधको उज्यालोमा प्रेरित गर्न बुद्धहरु जन्मने गर्दछन् । तर बुद्धहरु पनि प्रेरक मात्र हुन् । उनीहरु स्वयम् बुद्धूहरुको काम गर्न सक्दैनन् । बोधको उज्यालोमा हिँडन चाहनेहरु आफैँ अग्रसर हुन जरूरी हुन्छ ।
कोठाभित्र बसेको मान्छेलाई चाहेर पनि सूर्यको घामले स्पर्श गर्न सक्दैन । व्यक्ति कोठाबाट बाहिर निस्क्यो भने मात्र उसले उज्यालोको अनुभूति गर्न सक्दछ । हामी पनि धन, सम्पत्ति, रूपैयाँ, पैसा र प्रसिद्धिरुपी कोठाबाट बाहिर निस्केर मात्र शान्ति र मुक्तिको गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दछौँ । कोठाभित्र सूर्यको प्रकाश पुगेन भनेर सूर्यलाई दोष लगाउन सकिँदैन ।
बुद्ध पुरूषहरु पनि इच्छा, श्रम र लगनहीन मानिसलाई मुक्ति र शान्तिको सिन्धुमा पु¥याउन सक्दैनन् । यही सत्यलाई हृदयङ्गम गरी सप्रेम श्रम र लगनशीलताका बलमा आउनुुुुस्, हामी पनि शान्ति र मोक्षको यात्रा आरम्भ गरौँ । धूवाँ, धूलो र मैलो सेवन गरी जीवनप्रति गद्दारी नगरौँ । घृणा छोडेर प्रेमको अनुसरण गरौँ । ‘आगोलाई आगो’को दर्शन नभएर ‘आगोलाई पानी’को दर्शन अवलम्बन गर्ने कोसिस गरौँ, ‘घृणालाई घृणा’ नभएर ‘घृणालाई प्रेम’को व्यवहार गरौँ । बुद्धले यही गर्नुभएको थियो । सायद यही नै बुद्ध बन्ने उपाय पनि हो । बुद्धहरुले सत्यको अनुभूतिका लागि दिएका निर्देशन, ज्ञान र विज्ञानका लागि गरेका अनेक प्रयासलाई अपव्याख्या गर्न छोडेर तिनकै प्रेरणामा भौतिक संसारको मोहभङ्ग गर्दै अघि बढ्न सके लाग्छ, हामी पनि जीवनमुक्ति र परम शान्तिको अनुभूति गर्न सफल हुनेछौँ ।